Suldaan Cabdi Madoobe “Hadii Aysan Dowladda Degdeg Wax Uga Qaban Cabashadeena Shirka Cadaado Waan Ka Baxaynaa” – Goobjoog News
Suldaan Cabdi Madoobe oo ka mid ah waxgaradka ku sugan degmada Cadaado, kana qeybgalaya shirka maamul u sameynta gobalada Mudug iyo Galgaduud ayaa sheegay in shirka ay isaga bixi doonaan hadii dowladda Federaalka wax ka qaban cabashada ay qabaan.
Qaabka hadda lagu maamulayo shirka cadaado ayuu sheegay in aanu ahayn qaabkii loo baahnaa, islamarkaana beelo badan oo beeshooda ka mid tahay la xaqiray.
Suldaanka ayaa hoosta ka xariiqay in shirka Cadaado aanu u socon qaabkii loogu tala galay, laguna xadgudbay beelaha shirkaasi ka qeybgalaaya badankooda.
“Hadii aysan dowladda degdeg wax uga qaban cabashadeena shirka cadaado waan ka baxaynaa, waxaan ugu baaqaynaa dowladda in dadka afduubka laga daayo, shirka ma socodo, waxaana u arkaa qorshe kale oo cusub, ayna wadaan dad gaar ah, anaga ayaa gobalka degan, waa in naloo madax banaaneeyo aayaha shirka” ayuu yiri Suldaanka.
Hadalkaan ayaa imaanaya xilli ay jiraan waxgarad badan oo sheegaya in shirka ka socda Cadaado aanu u socon qaabkii loogu tala galay, saluugsanna qaabka beelaha ay shirkaasi uga qeybgalayaan.
Shir Looga Doodayo Dastuurka Jubbaland Oo Ka Socda Degmada Dhuubleey Ee Jubbada Hoose
Gudoomiye Cirfo “Waxbarashada Gobalka Galgaduud Wax Badan Ayaan Ka Qabanay”